China DDI (Dimeryl Diisocyanate) fekitori uye vagadziri | YANXA
Metal Powder uye Yakapetwa Poda
Chigadzirwa: Dimeryl diisocyanateD DDI 1410） CAS Kwete. 68239-06-5
Molecular fomula: C36H66N2O2 EINECS ： 269-419-6
Kubata uye Kuchengetedza Chengetedzo: GADZIRA KABHUKU DZINOGONESEDZWA PASI PAMUSI PAKUSHANDISA. Chengetera munzvimbo yakaoma.
Dimeryl diisocyanate (DDI) yakasarudzika aliphatic (dimer fatty acid diisocyanate) diisocyanate iyo inogona kushandiswa nemakemikari ane anoshanda hydrogen kugadzirira yakaderera mamorekuru zvinorema zvigadzirwa kana akakosha ma polymers.
DDI iketani refu yeketani neketani huru yemadimiki emafuta acids ane makumi matatu nemaatomu ecarbon. Ichi chimiro chemusana chinopa DDI kukunda kushanduka, kushomeka kwemvura uye yakaderera chepfu pamusoro pemamwe aliphatic isocyanates.
DDI yakaderera viscosity mvura iri nyore kusungunuka mune akawanda polar kana nonpolar solvents.
1) data rese rehunyanzvi rinoratidzwa pamusoro nderereferensi yako.
2) kumwe kutaurwa kunogamuchirwa kuti uenderere mberi nekukurukurirana.
DDI inogona kushandiswa mune yakasimba rocket propellant, machira kupedzisa, bepa, dehwe uye machira anodzinga, huni kuchengetedza mishonga, kugadza magetsi uye kugadzirira kweakakosha zvivakwa zve polyurethane (urea) elastomers, adhesive uye sealant, nezvimwe.
DDI ine zvivakwa zvine yakaderera chepfu, isina yero, inonyunguduka mune akawanda makemikari solvents, yakaderera mvura inonzwisisika uye yakaderera viscosity.
MuFekitori indasitiri, DDI inoratidza yakanakisa yekushandisa tarisiro mune inodzora mvura uye inonyorova zvivakwa kumachira. Iyo isinganetsi mvura pane inonhuhwirira isocyanates uye inogona kushandiswa kugadzirira yakatsiga aqueous emulsions. DDI inogona kuvandudza mhedzisiro yemvura-inodzora uye mafuta-anodzora machira akafuridzirwa. Kana ichishandiswa musanganiswa, DDI inogona kuvandudza zvakanyanya mvura-inodzora uye mafuta-anodzinga mafuta emachira.
DDI, yakagadzirirwa kubva kune yakasviba fatty acids, inowanzo girini, bio-inogadziriswazve isocyanate dzakasiyana. Inofananidzwa nepasirese isocyanate TDI, MDI, HDI uye IPDI, DDI haina-chepfu uye haina kukurudzira.
Kubata: Dzivisa kusangana nemvura. Ita shuwa nemhepo yakanaka yekubasa.
Kuchengeta: Chengetera mumidziyo yakasungwa yakavharwa, inotonhorera uye yakaoma.
Ruzivo rwekufambisa: isina kutongwa sechinhu chine njodzi.
Pashure: Potassium Perchlorate
Zvadaro: Sodium Perchlorate
Ammonium Nitrate Phase yakagadzikana
YANXA (HK) YEMAHARA INDUSTRIAL CO., LTD.